Uyu muchina wakachipa uye unoshanda wekuverenga kwevanhu. Vazhinji veduyekuverenga kwevanhu sensorzviri patent zvigadzirwa. Kuti tidzivise kubiridzira, hatina kuisa zvakawandisa pawebhusaiti. Unogona kutaura nevashandi vedu vekutengesa kuti vakutumire ruzivo rwakadzama nezve yeduyekuverenga kwevanhu sensor.
Iyo yekumisikidza mutengo weiyo HPC015U yekuverenga kwevanhu sensor yakaderera zvakanyanya, isina kuvakwa, yekumhanyisa kumisikidza, uye inokodzera kwazvo pamatanho makuru emaketeni emahofisi makuru kuti aite chokwadi kuverenga kwevanhu.
Hunhu hweHPC015U yekuverenga kwevanhu muchina; kushanda kwenguva refu, kudzivirirwa kwedata, nzira mbiri yekuverenga, kureba-kureba kwekuona, LCD skrini inopesana nemwenje kupindirana, Ultra-yakakwira kunzwisisika, rutsigiro rwemasevhisi akagadzirwa, hunyanzvi chitarisiko dhizaini, ongororo yedata, idiki uye inoyevedza, Nyore kuisa, universal indoor nekunze.
Yaro yekuverenga kwevanhu sensor inokurudzirwa kuti ishandiswe kwekunze mukati memamita gumi, iine yayo yekuratidzira skrini, yemukati inokurudzirwa nzvimbo yekushandisa iri mukati memamita gumi nematanhatu, unogona kutarisa data yepfupiso yezuva nezuva yemazuva makumi matatu apfuura uye gore rapfuura kuburikidza yekuverenga kwevanhu sensor ratidza Pfupiso yemwedzi data, nhoroondo yezvakaitika inogona kujekeswa sezvazvinodiwa, nyore kushandisa, yakakodzera kushandiswa muchitoro chimwe chete.
Iyo HPC015U yekuverenga kwevanhu sensor ine goko rakaisvonaka rine hurefu hwe65MM uye hupamhi hwe23MM. Iyo inovandudzwa uye yakagadzirirwa neMRB uye ine kuvimbika kwakanyanya uye aesthetics.
Ruvara Dema kana Muchena
Sevha Chikamu nguva chaiyo / 1 miniti / 30 maminetsi / 1 awa, nezvimwe
Data Export nzira kuburikidza ne USB tambo kana U disk
Data Kuongorora Nzira paLC skrini / PC
Bhatiri anosvika 1.5 gore
Kuverenga kwemunhu sensor kunoshanda sei?
1. Kuziva kwakangwara kwenzira yekupinda nekubuda kwevanhu, mbiri-nzira dzevapfuuri dzinoyerera manhamba, inogona kuona kumhanya kumhanya kwe20KM / H (yakaenzana nepakati-inomhanya inomhanya mhanyisa).
2. Iyo yakavakirwa-mukati system wachi inoita kuti chishandiso chishande zvine hunhu. Kuverenga kwevanhu data inogona kuchengetwa zvinoenderana nezuva. Unogona kutarisa iyokuverenga kwevanhu data rakapinda uye kubuda mazuva ese mumazuva makumi matatu apfuura chero nguva, uye iwe unogona kuona iyo yakazara mukati nekubuda mu kuverenga kwevanhu data yemwedzi wega wega mugore rekupedzisira.
3. Nguva yekuverenga inogona kumisikidzwa, uye iyo data yevafambi yekuyerera inogadzirwa panguva dzebhizinesi haizoverengerwa, zvichiita kuti data riwedzere kuitika.
4. Lithium bhatiri magetsi emagetsi, isina waya data kutapurirana, hapana wiring inodikanwa, yakaderera simba rekushandisa dhizaini, yepamusoro-inokwanisa kuraswa bhatiri, ichipa inoenderera yekushanda maawa anopfuura anopfuura masere mwedzi.
5. Pane LCD inoratidzira pane iyo yekuverenga kwevanhu sensor, iyo inogona kuratidza zviri pachena zvirimo zvisinei muzuva kana murima. Bata kudzora switch, kubata mashandiro pane iyo pani, zviri nyore uye nekukurumidza.
6. Nebasa rinopesana nechiedza chezuva, rinogona kushandiswa mukati nekunze, nzvimbo yekushandisa mukati iri mukati memamita gumi nematanhatu, nzvimbo yekushandisa yekunze iri mukati memamita gumi.
Chii chinonzi Human counter sensor?
1. Yevanhu counter sensor inotora infrared beam tekinoroji, bhatiri-inofambiswa, isina wiring, inosiyanisa iko kwekufamba kwevatakurwi, yemunhu kuverenga muchina inopa iyo LED yekuratidzira interface, iyo inogona kumutswa nepaneru yekubata mashandiro, uye iyo LED kuratidza inogona kuratidza yazvino yasara lithiamu bhatiri simba, Iyo yakazara huwandu hwevatakurwi inoyerera ichipinda uye ichibuda munzira mbiri pazuva uye nezuva uye nenguva yezuva.
2. Kunze kwenyika Yevanhu counter sensor data:
Mushandisi anogona kugadzirisa kana kugadzirisa data kana kunongedza zvakananga kuburikidza nekombuta yeECCEL software, uye mushandisi anogona kutumira iyo CSV data faira kuburikidza neUSD data tambo kana U dhisiki.
3.Customized sevhisi ye Yevanhu counter sensor
Mavara maviri ekutanga aripo, matema uye machena, uye mavara ekugadzirisa masevhisi aripo
4. Simba rekushandisa Yevanhu counter sensor:
Iko kushanda kwazvino mune yakatarisa mamiriro ndeye chete 300uA; iyo inoshanda irimo yeiyo yakavakirwa-mukati WIFI module ndeye 67mA, zvinongotora masekondi mana kubva kutanga-kumusoro kusvika pakupedzisa kwekutapudza data, uye iro bhatiri simba rinopedzwa iri 0.07mAh, izvo zvinoita kuti zvikwanise kushandisa 2400mAh lithiamu bhatiri kuenderera. zvinogoneka kushanda kwemwedzi misere.
5. Yevanhu counter sensor manejimendi basa
Iyo zvakare ine yakakwana faira manejimendi basa, rwoga rinogadzira maforodha zvinoenderana neSN kodhi dzeakasiyana mapasipoti ekuyerera, uye inoshandisa iyo U dhisiki kubata akawanda mapasipoti kuyerera rekodhi mafaera.
6. Kuiswa kwe Yevanhu counter sensor
Mupfuuri wekuyerera pakaunda ane infrared inogamuchira chishandiso ine yakanyanya kukwirira kwehunyanzvi, izvo zviri nyore kwazvo kugamuchira iyo yekutumira chiratidzo. Iyo inogona achiri kushandiswa zvakajairika kana kutsauka kuri gumi madhigirii. Iwe unongoda kushandisa inoenderana-mbiri mativi tepi kugadzirisa iyo yekufamba yekuyerera yekuverenga terminal uye mutepfenyuri kune iye mutyairi kuyerera Iyo Statistical chiteshi kana mativi ese emusuwo nekubuda zvakaringana, uye kumisikidza kuri nyore.
7. Yevanhu counter sensor kuongorora data
Kana mutyairi wekuyerera achishandisa iyo-yega-nzira, inochengetedza iyo yezuva nezuva inokwenenzverwa yevatakuri yekuyerera manhamba kwemazuva makumi matatu apfuura uye nemwedzi wecumulative yevatakuri yekuyerera manhamba kwemwedzi gumi nembiri yekupedzisira. Inogona kuve yakabatana kuburikidza nefoni smart (Android, IOS) uye kupinda mukati, uye wozoshandisa iyo WEB Peji kubhurawuza data.
MRB USB yemunhu inopikisa sensor vhidhiyo
Tine mhando dzakawanda dze IR yekuverenga kwevanhu sensor, 2D, 3D, AI yekuverenga kwevanhu sensor, panogara paine imwe inokukodzera, ndapota taura nesu, isu tinokurudzira iyo yakakodzera kwazvo yekuverenga kwevanhu sensor zvako mukati memaawa makumi maviri nemana.
Pashure: MRB yekutengesa traffic counter yevatengesi vanhu kuverenga HPC002
Zvadaro: MRB wifi tsoka inopesana HPC015S